Home » Apụta » FilmLight na-emepụta Agha Nzuzo ịchọ 'Ndị America'
Usoro isii nwere maka HDR na 4K Ultra HD na Technicolor PostWorks
Ihe nke Emmy nke isii na nke ikpeazụ emeri ndị America, oge nledo nke nledo nke e debere na 1980s n'oge Agha Nzuzo, na nso nso a kwụsịrị na HDR na 4K Ultra HD na Technicolor PostWorks na New York. Ebe ọ bụ na usoro nhazi abụọ, ọhụụ nke usoro mmechi ahụ bụ ọrụ nke John Crowley, Senior Digital Colourist, na-arụ ọrụ na sistemụ grading Baselight site na FilmLight.
N'ihe dị ka usoro abụọ dị na 2014, mgbe Director-Producer Dan Sackheim sonyere ndị America, ihe mgbaru ọsọ bụ ịmepụta ihe nkiri cinematic. Ndị na-eme ihe omume ahụ na-echekwa ihe ịma aka nke ịkụda nguzozi kwesịrị ekwesị n'etiti anya nke telivishọn na 80s na nke oge a, nke dị egwu, nke ndị mmadụ na-atụ anya taa, nke, maka usoro isii, gụnyere 4K Ultra HD na HDR. A ghaghị ime ihe a nile na telivishọn na mmefu ego na telivishọn.
David Woods na Crystal Whelan jere ozi dị ka ihe ngosi ahụ, nke Fox 21 Television Studios na FX Productions maka FX Network mere.
"Ọ na-abụkarị ihe ịma aka ịmata ọchịchọ nke akụkọ akụkọ na ụwa ndị a na-ebi na telifon atụmatụ ego," kwuru onye na-emepụta osisi. "O yikwara ka oge ọ bụla anyị nọ na-amụba ọnụ ọgụgụ nke ihe ngosi anya. Na ọchịchọ nke akụkọ ahụ, anyị na-eme ike anyị niile, ime ka 2018 New York yie 1987 Washington na Moscow. "
Mgbe ị na-eme ihe ngosi 35 afọ gara aga na Washington na Moscow, ma na-agbapụ na ebe dị na New York City, otu n'ime nsogbu ndị ahụ bụ ịzobe ihe ndị ga-eme ka ọnọdụ ahụ pụọ. Nke ahụ dị mkpa dị mkpa na HDR na 4K ebe oke ntinye na nkọwa na-eme ka o sie ike ịgbanwe nkọwa, ya mere otu n'ime ọrụ Crowley bụ iji ngwá ọrụ ncheta dị na Baselight iji kpuchie ma zoo ihe na ezughị okè.
Emechara nke ọ bụla HD na SDR, na Crowley na-atụ maka nchịkọta mkpọchi. Ọ na-edepụta ndepụta ọ bụla emelitere na nchịkọta data na FilmLight BLG, na-ahapụ onye editọ na onye nlekọta ụda iji nweta akara ule kachasị elu site na Baselight maka uchu, ihe mgbakwunye Baselight maka uchu Media andiwet.
"The uchu iji na-arụ ọrụ na Baselight nyere anyị mgbanwe iji mee ka ọkpụkpụ ikpeazụ na nhụcha anya dị n'ime ebe ndozi ahụ karịa ka anyị meworo n'oge gara aga, " Crowley kọwara. "Anyị enwere ike ịtụle usoro isi ebe anyị na-ebufe ụfọdụ akụkụ anya, ma nwee ike ịmepụta foto na-achacha acha azụ na ngwakọta nke na-esite n'ọnụ ụlọ ndozi ahụ, bụ nke zọpụtara anyị oge mmepụta ihe bara uru."
Ozugbo SDR gafechara, Crowley mepụtara ihe HDR.
"Enwere ọchịchọ siri ike ịnọgide na-ele anya na anyị ejirila okpukpu ise gafere HD na UHD, SDR na HDR, " onye na-emepụta ihe bụ David Woods kwuru. "Enwere m nchegbu na-aga n'ime oge ma na njedebe, ọ dị ịrịba ama na ngwa ngwa ma yie yie ka John Crowley na-eme ngwa ngwa wetara anya si SDR n'ime HDR. Baselight bụ ngwá ọrụ kachasị mma m hụworo mgbe m na-agbanwe n'etiti abụọ ahụ. "
"Usoro ahụ dị nnọọ mma," gbakwunyere Crowley, "Ma mee ka ọrụ niile ahụ na-aga n'ihu n'enweghị ihe mgbochi."
"Iji bụrụ ihe ngosi nke dịka nke a bụ ihe ùgwù dị oke mkpa," o kwubiri. "Foto a na-ekiri anya, ụdị ihe a na-ahụ anya nke ọma, ihe omume dị egwu na edemede ndị na-adọrọ mmasị chọrọ ka m nọ n'elu egwuregwu m maka ihe ọ bụla. Enwere m mmetụta nke ọma na m kere òkè n'egwuregwu ahụ. "
Nzukọ ikpeazụ nke ndị America nwetara Emmy Award maka onye na-edu ndú na usoro ihe nkiri nke gara na Matiu Rhys, nakwa Emmy Award maka ihe odide doro anya n'usoro ihe ngosi na usoro ihe nkiri Joel Fields na Joe Weisberg.
4K Ultra HD Baselight Agha Nzuzo Colorist agba Grading colourist Crystal Whelan Dan Sackheim David Woods Emmy Award filmlight Fox 21 Television Studios FX Network Mmepụta FX HDR Joe Weisberg Joel Fields John Crowley Matthew Rhys Mmekọrịta MKM MKM Marketing Communications Technicolor - PostWorks The America	2018-10-29
Previous: Akwukwo Nsuso Facebook Live na URSA Broadcast na ATEM 4 M / E Broadcast Studio 4K
Osote: Igwe Injinia